ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन् राम्रा ल्यापटप(मूल्य र फिचर सहित) - Khabarshala ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन् राम्रा ल्यापटप(मूल्य र फिचर सहित) - Khabarshala
ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन् राम्रा ल्यापटप(मूल्य र फिचर सहित)
खबरशाला संवाददाता | कार्तिक ०१, २०७७
यसको सार्प प्यानलले उच्चस्तरको पिक्चर प्रदान गर्दछ । यसको स्क्रिन वास्तवमा म्याकबुक प्रोको स्क्रिन भन्दा पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा ६२९ डलर छ